Izinja ezi-6 ezingcono kakhulu zangaphandle zezinja | Izinja Zomhlaba
Izindlwana ezingaphandle eziyisithupha ezihamba phambili zezinja
Uma sisanda kukhuluma ngayo Izindlu eziyi-7 ezinhle kakhulu zezinja, namuhla nathi sizokhuluma ngakho ukukhethwa kwamadokodo angaphandle, noma ngabe uzoba nengqayizivele yokuthi wonke angasetshenziswa ngaphandle kwekhaya, noma ngabe kusezingeni eliphezulu, kuvulandi noma kuvulandi.
Manje selizofika ihlobo, izindlu zezinja zangaphandle zingumqondo omuhle uma sifuna ukugcina inja yethu iphephile ekushiseni kwasemini. futhi ivikelekile endaweni yokukhosela ebusuku okuyigcina ikude nomswakama nomoya opholile ebusuku. Ngaphezu kwalokho, kule ndatshana sizokunikeza futhi umhlahlandlela ngamathiphu lapho ukhetha indlu yangaphandle yesilwane sakho. Funda ukuze uzibone!
I-Wasabi - I-Light Green Plus...
I-Curver 221088 Inja yeshedi ...
I-Outsunny Booth ...
I-Stark Garden Shed, ...
1 Ishede elingcono kakhulu langaphandle
1.1 Isikhala esiphakeme se-resin
1.2 Ishede langaphandle lamapulangwe
1.3 UKennel wezinja ezinkulu
1.4 Ishede elincane elingena umoya omncane
1.5 Resin ishede langaphandle ngomklamo omuhle kakhulu
1.6 Ishedi yokhuni ephelele ngokuphelele
2 Amathiphu lapho ukhetha ishede eliphelele langaphandle
2.3 Izidingo zakho nezenja yakho
3 Ungazithenga kuphi izindlu zangaphandle zezinja
Ishede elingcono kakhulu langaphandle
Isikhala esiphakeme se-resin
I-Suncast DH250 - Idokodo ...
Leli sheli langaphandle likulungele ukuba nendawo enotshani noma umhlaba, ngoba noma ngabe umhlaba umanzi, amanzi awangeni ngaphakathi ngenxa yokuthi yakhiwe nge-resin ephakeme kakhulu. Kubandakanya nocezu olwengeziwe phansi oluqinisa isisekelo futhi luvimbele inja ukuthi ingamanzi. Ngaphezu kwalokho, okokusebenza akukubi nhlobo, ngoba akuboli (njengokhuni) noma kuphuma umbala noma kwephule (njengamanye amapulasitiki). Ngaphezu kwalokho, inomklamo wakudala kakhulu kepha awuhle kancane.
Elinye iphuzu esivuna ukuthi lihlanganiswe ngokulula kakhulu, ngoba kufanele ulingane izingcezu ezahlukahlukene ezifakiwe. Kuthatha kuphela imizuzu emihlanu. Indlwana yenenala ifaka ama-spout ukuyilungisa phansi kanye nomnyango we-vinyl (ofana nekhethini elisobala) ukuze inja yakho ingene kalula esibayeni futhi ivikele izakhi (uma ungaqiniseki, awukwazi ukuzikhweza!) . Kulula futhi ukuyihlanza futhi inomoya owanele, okubaluleke kakhulu ehlobo.
Okuwukuphela kwephuzu elibi ukuthi, yize kukhonjisiwe ukuthi yindlwana ekwazi ukwamukela izinja ezifika kuma-32 kilos,Abanye abathengi bakhombisa ukuthi kuya ngenja kungaba ncanyana.
Ishede langaphandle lamapulangwe
Isitoreji seFerplast ...
Indlu ebukeka ilula kepha iqinile impela. Le modeli yakhiwe ngamashidi aminyene okhuni lweNordic lukaphayini olulungiswe ngezikulufo. Idizayini yayo ibuye ibe nophahla lwama-resin olutshekile ukuze amanzi angaqoqeki, umnyango onensimbi eqinisa ukulunywa nokuklwebheka nemilenze emine ephakamisa indlu futhi uyihlukanise nomhlabathi, ngaleyo ndlela iphephe kumswakama.
Njengephuzu elibi, okuthile okubonakala sengathi kuyaphindwa kumamodeli ahlukene amadokodo angaphandle: isikhala sincane kunesikhangisiwe.
UKennel wezinja ezinkulu
Uma izindlu zokugcina izinja ezincane kungeyona into yakho futhi okufunayo kuyicala elikhulu okufanele ulibeke phakathi kwephathiyo, le ndlu ecishe ibe yimitha ubude nendlu yezinja ephakeme ingaba yindlela enhle. Yenziwe nge-resin futhi inomklamo omuhle kakhulu, omile njengeqhugwane lakudala nezinyathelo ezithile eziphakamisa indlu kancane phezulu, okuyihlukanisa nomhlabathi. Ngaphezu kwalokho, kulula kakhulu ukuhlangana nokuhlanza kulula kakhulu.
Ishede elincane elingena umoya omncane
IGARDIUN KZT1005 - Idokodo ...
I-Resin sheds yangaphandle yonke isebenza ngendlela efanayo, futhi nalokhu akuhlukile. Njengakumacala adlule, iphakanyisiwe kancane ukuyihlukanisa nomhlabathi, inomklamo omuhle kakhulu ophahleni oluhlaza oluthambile (oluvimbela amanzi ukuba angami) futhi kulula kakhulu ukuhlangana nokuhlanza. Kodwa-ke, le modeli ethile ivelela ukuba nama-grilles asebenzayo ezinhlangothini ukufaka umoya ngaphakathi.
Resin ishede langaphandle ngomklamo omuhle kakhulu
I-Suncast DH350 - Idokodo ...
Elinye i-resin shed, njengakwamanye amamodeli, kulula kakhulu ukulihlanganisa nokulihlanza futhi linekhethini lepulasitiki elisusekayo elizobekwa emnyango. Kulokhu, noma kunjalo, isezingeni eliphansi, yize kungeyona into ekhathaza kakhulu, ngoba into eyenziwe ngayo ivimbela amanzi ukuthi angene. Ngaphezu kwalokho, inomklamo opholile impela, ngoba inamawindi athile aqoshwe ezinhlangothini futhi uphahla lwanemininingwane yamathayili.
Ishedi yokhuni ephelele ngokuphelele
Futhi sigcina sesinendlwana yamapulangwe enomklamo wakudala impela, njengoba inophahla olutshekile olumise okweqhugwane. Kufakwe umbandela phansi ngemilenze yepulasitiki futhi wenziwe ngokhuni olumelana kakhulu. Iphinde ibe nokuqiniswa kwensimbi emnyango nasophahleni kanye nekhethini elisusekayo.
Esinye isici esithakazelisa kakhulu sale modeli yisilawuli somoya omncane ngemuva., ongayivula noma uyivale kuye ngokuthi ufuna ingaphakathi libe nomoya omncane noma omncane. Ngaphezu kwalokho, inamamodeli amaningana atholakala ukuthi ukhethe okungcono kakhulu kwenja yakho.
Amathiphu lapho ukhetha ishede eliphelele langaphandle
Lapho ukhetha indlu yenja enhle yangaphandle Akudingeki nje kuphela ukuthi ucabangele okuthandayo noma okwenja yakho, ngoba ezinye izinto zingena esinqumweni ezingakwenza uthathe isinqumo sodwa noma esinye. Ngokwesibonelo:
Indawo ozobeka kuyo ishede nayo ibaluleke kakhulu lapho ukhetha imodeli eyodwa noma enye. Uma kuyitela noma iphansi noma elenziwe uthayela akunandaba, kepha uma kunjalo, isibonelo, umhlaba noma utshani Ungaba nentshisekelo ngemodeli ehlukaniswe nomhlabathi ngemilenze noma ukuphakama ukuze umswakama ungavimbi noma ubole ishede, esimweni semodeli yokhuni.
Isimo sezulu singesinye isici esingakwenza uthathe isinqumo ngedokodo elilodwa noma kwelinye. Isibonelo, ezindaweni ezishisa kakhulu kungcono ukhethe indlu enomoya ongcono nokhuni, hhayi ipulasitiki. Uma isimo sezulu sibanda impela, izinkuni nazo ziyinto enhle yokugcina ukushisa. Ngokuphambene nalokho, ezimweni ezinomswakama kungakuhle kakhulu ukukhetha i-resin, ngoba ihlukanisa umswakama kahle kakhulu.
Izidingo zakho nezenja yakho
Ekugcineni, ngokusobala ungabheka nezidingo zakho nalezo zesilwane sakho. Ngalokhu asisho ukuthi uthanda okubomvana noma okuluhlaza okwesibhakabhaka ngaphezulu, kepha lokho uma kuyinja ethukile, khetha indlu yenja enendawo enkulu yokuhamba, noma uma uthanda ukuluma, khetha imodeli emelana ikakhulukazi. Ngokunjalo-ke, uma uhlela ukufaka izinto ngaphakathi endlini (ezifana nengubo yokulala ukuze ikhululeke noma ithoyizi) kungcono ukuthi uthenge imodeli evikela kakhulu ukuvimbela umswakama ekuboleni izingubo noma ekugcineni ube nezimbungulu.
Ungazithenga kuphi izindlu zangaphandle zezinja
Akunzima ukuthola izitolo eziningi ezahlukahlukene lapho bathengisa khona lo mkhiqizo, futhi izitolo ezibhekiswe ezifuyweni noma cha. Phakathi kokuthandwa kakhulu esikutholayo:
AmazonImpela, ingenye yezindawo zokuqala lapho ungabheka indlu yenja yangaphandle evumelana nezidingo zakho kanye nezenja yakho. Abagcini nje ngokuba namamodeli amaningi, futhi bavumelana nawo wonke amaphakethe nokunambitheka, futhi uzothola zonke izinhlobo zezinhlobonhlobo nobukhulu. Futhi, ngesici sayo seNdunankulu bayiletha ekhaya ngokushesha.
En los ama-hypermarket Ngekhaya elifana neLoyoy Merlin noma iBrico Depot uzothola namadokodo angaphandle. Kulezi zimo ukuhlukahluka kuthe ukulingana ngokwengeziwe, yize bakwenzela iqiniso lokuthi ungababona kubantu futhi uhambe nabo ngalolo suku. Ngaphezu kwalokho, iningi futhi linesitolo esiku-inthanethi, uma kungenzeka kube lula kuwe.
I-Las izitolo zezilwane Izitolo ezikhethekile ezifana neTiendaAnimal noma i-Kiwoko nazo ziyindlela enhle yokuthola amamodeli ahlukahlukene. Ngaphezu kwalokho, ngokukhethekile, izeluleko zabo zihle kakhulu.
Siyethemba ukuthi sikusizile lapho sikhetha indlu yenja enhle ongaphandle kwakho nenja yakho. Sitshele, bewazi lezi zinhlobo? Uhlela ukubeka kuphi idokodo? Ingabe uke wazama okuthile? Ngabe ucabanga ukuthi sishiye noma yini ukuze sincome? Khumbula ukuthi ungasitshela ukuthi ufunani kumazwana!
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izesekeli zezinja » Izindlwana ezingaphandle eziyisithupha ezihamba phambili zezinja
Amachibi ayi-6 amahle kakhulu wezinja
Iminyango emi-5 emihle kakhulu yezinja